नेताहरुमा शनि, मनि र दुश्मनीको राप – समावेशी
नेताहरुमा शनि, मनि र दुश्मनीको राप
बुधबार, फाल्गुण २२, २०७५ | १६:४५:५० |
– संकेत कोइराला –
एकदिन स्वर्गमा बस्दाबस्दै वाक्क दिक्क भएका देवराज इन्द्र माछाको रुप धारण गरी पोखरीमा रमाईलो गर्दै पौडी खेल्दै थिए । त्यतिकैमा माझीहरुले थापेको बल्छीमा इन्द्र परेछन् । बल्छीको तिखो धारले इन्द्रको मुखमा नराम्ररी घाउ बनाएछ । देवता भएका कारण रुप फेर्दै बल्छीबाट बचेर इन्द्र स्वर्गलोकतिर भाग्न सफल भए । माझीहरूले विना कसुर आपूmलाई चोट लगाएकोमा क्रुद्ध इन्द्र उनीहरुलाई दण्ड दिनुपर्ने माग सहित कैलाश पर्वत पुगे । सबै कुरा सुनेपछि शिवजीले ईन्द्रलाई सोधेछन्– ‘शिव तिमी त्यो पोखरीमा इन्द्र भएर बसेका थियौ ?’
शोक प्र्रस्ताव पारित गर्न बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा स्वर्गीय अधिकारीको संलग्नता नरहेको भन्दै आफ्नो तर्पmबाट ‘क्लिन चिट’ दिनुभयो । यस्तो खालको फरमान राणा शासनमा पनि थिएन । उत्तरकोरिया र साउदीमा पनि छैन् । भावुकतावश आएका प्रधानमन्त्रीका यी टिकाटिप्पणी हेर्दा सुन्दा जति सहज लागेपनि राज्यको विधि, विधान उल्टाउने अधिकार संविधानले कार्यकारी सरकार प्रमुखलाई दिएको छैन । अझ अरबौंको घोटाला विषय कसैको सनक र भावनाबाट निर्देशित हुने प्रश्नै उठ्दैन ।
दोषी राजालाई चिहानबाट निकालेर भाला रोपिएको, निर्दोष राजालाई चिहानबाट निकालेर गद्दीमा बसालिएको बेलायती इतिहास त धेरैले पढेकै छन् । देशको जीवनमा ठट्टा गरियो भने त्यसको लाभाले आपैंmलाई सिध्याउँछ भन्ने तथ्य घाँटीघाँटीमा राख्न जरुरी छ । त्यसैले त यस्तै विषयलाई छानविन गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग आयोग क्रियाशील रहेको हो । व्यक्ति दोषी भए नभएको पैmसला गर्ने काम स्वतन्त्र न्यायालयको हो । अझ सरकार आपैंm विधिको अर्को नाम हो । मुलुकको कार्यकारी सरकार प्रमुखले देशको कानुन, विधि र प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गर्छु भनेर ईश्वरको नाममा सपथ खाएको हुन्छ । यति संवेदनशील विषयमा भावुकतासंगै देखिएको उदारता वास्तवमा प्रत्युत्पादक हुन्छ । संवैधानिक स्वतन्त्र निकाय अख्तियारले प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा बोलिदिएको अवस्था मात्र साँचो शैलीको पैmसला हो ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको कामको स्वतन्त्रता हो । कसैले चाहेर पनि फोक्सोको काम मुटुले गर्न सक्दैन । किड्नीको काम मस्तिष्कले गर्न सम्भव छैन । न यी अंगले कसैको दबाबमा काम गर्न मिल्छ, न अरुको काम नै ठेक्का लिन । बरु यिनीहरुलाई स्वच्छन्द तरीकाले चल्ने वातावरणको निर्माण चाहिँ साँचो लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिन्छ । सरकारी संयन्त्रमा बसेर गरिएका निर्णय जुगौं जुग जीवित रहन्छन् । थोर धेर जति होस् , सरकारी धन हजुरबाले खाएको छ भने नातिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अझ कलीयुगमा त आफ्नै आँखा अगाडि नांगिएर सत्य नाच्छ । राज्यले निर्देशित गरेको कानुन अनुसार छिमेकी देश पाकिस्तानमा राजदरबारको पात हल्लिँदा थर्कमान हुनुपर्ने ज्ञानेन्द्र राजा कहाँ पुगे ? गणतन्त्रलाई बयलगाढा भन्ने प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्नुभयो । यसको अर्थ केपी ओलीको डिजाइनले नभई समयले गणतन्त्र ल्याएको हो । नेपालमा कसैले चाहेर ल्याउने र लाने भइदिएको भए देशको अनुहार यस्तो हुने थिएन । सतहमा देखिएका सबै नेता प्रयोगका पात्र हुन । दशाको शनि, कमाईको मनि अन्ततः दुश्मनी नेताको नियति बनेको छ ।
नेपाललाई रत्नपार्कबाट सार्वभौम देश बनाउनु अहिलेको चुनौती हो । सत्ता नपाएसम्म क्रान्तिकारीहरु सत्ता पाउनासाथ आज्ञाकारी हुन्छन् । प्रधानमन्त्री हुँदाताका बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए– ‘सत्ताको साँचो त अन्तै पो रहेछ ।’ बीपी– जीपी, केपी–पीके, मनमोहन– माधवदेखि शेरबहादुर हुँदै झलनाथसम्म यस कटु सत्यका पारंगत व्यक्तित्वहरु हुन् । तर यो विषयलाई उनीहरुले फगतः कम्बल ओढेर घिउ खाने माध्यम मात्र बनाए । अरु त अरु कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरु कुरामा क्रान्तिकारी, आदेशका चरम आज्ञाकारी निस्कँदा राजनीतिक परिवर्तन एउटा ठट्टामा सीमित बन्दै गयो । सातु खाएर जनयुद्ध लडेको गौरव गरेका तिनै नेता एकाध वर्षमै ब्ल्याक लेबल, ब्लु लेबलदेखि बटरप्mलाई ब्राण्डका पारखी हुन पुगे । तर सिसाको गिलासमा खायो भने हैसियत खुल्ने डरले स्टीलको गिलासमा खाएर जनताको नाममा चिसो पानी खाएको पाखण्ड ओकल्न भने उनीहरु पछि पर्दैनन् । मोबाइल फोनको हरियो थिचे उठ्छ, रातो थिचे काटिन्छ बाहेकको ज्ञान नभएका नेताहरु आईफोनको पारखी भएका छन् । अरु त परै छाडौं एउटा सामान्य म्यासेज पढ्न र पठाउने कला पनि उनीहरुमा देखिदैन । हो देश पनि तिनीहरुका लागि त्यही मोबाइल सेटजस्तै भएको छ । नजान्नेले मोबाइल थिचेर त्यसको प्याड थिलथिलो बनाए भैंm नेताहरुको प्रयोगले देशको आकार अमिबाजस्तै बन्न पुगेको छ । मन पर्दा तिनै नेतालाई चाटेर देवत्वकरण गरियो । मन नपर्ने वित्तिक्कै खुँडा बोकेर काट्न खोजियो ।
नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसंग उभिएर फोटो खिचेका छन् । बेडरुमदेखि बैठकसम्म त्यो फोटो सगौरव झुण्ड्याएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिसंग फोटो खिच्ने लोभ त सबैमा पलायो तर सिक्नुपर्ने कार्यशैलीप्रति भने उनीहरु बेखबरजस्तै बने । विहान उठेका डोनाल्ड ट्रम्प मर्निङ वाक गर्दा सुरक्षा सल्लाहकार, चिया पिउँदा राजनीतिक सल्लाहकार र टेनिस खेल्दा कुटनीतिक सल्लाहकारसंग बैठक भ्याइसकेका हुन्छन् । विश्व चलाउने ट्रम्प यति सजिलै सवै काम सिध्याउँछन् । विडम्बना आपूmले नेतृत्व गरेका दललाई गुठीमा रुपान्तरण गरेका हाम्रा नेताहरु बैठकलाई घरको माना बचाउने र जीब्रो भिजाउने मौकाका रुपमा हेर्ने गर्छन । सहमतिका नाममा पल्टाइने गरेको गाई र त्रिशुलको अन्तरकथा पनि यही नै हो ।
माओ कि ट्रम्प ? यसो भनेर गाई त्रिशुल खेलाउने हो भने अधिकांश माओवादी कार्यकर्ताहरुको रोजाई ट्रम्प पर्नेमा शंका छैन् । कार्यकर्ताहरुलाई माक्र्स, लेनिन, ख्रुश्चेभदेखि माओ चालिसासम्म कण्ठ गराएका नेताहरुका लागि युरोप अमेरिका बाहेक अरु मुलुक अछुतजस्तै हुने गरेका छन् । नेताहरुले कार्यकर्तालाई जिन्दगीभर उत्तर कोरिया, क्यूवा र चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको पाठ पढाएर जाँचमा भने अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड र दक्षिण कोरियाको प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । त्यसैले त इमान्दार कम्युनिष्टहरु यसखाले पाखण्डको जामा लगाउन नसक्दा फेल भएर न हाँस, न बकुल्लाको चालमा बाँचिरहेका छन् । अमेरिकाको विरोध नगरे जात जाने दर्शन बोकेका दर्जनौ माओवादी कार्यकर्ताहरुले अमेरिकी नागरिक हुन आप्mनै पार्टीले दुख दिएर अमेरिका भास्सिनु परेको व्यहोरामा ल्याप्चे लगाएर अमेरिकी अदालतमा कागजात पेश गर्ने गरेका छन् ।
अब नेपालको कम्युनिष्ट नेतृत्वले फेसबुकका मार्क जुकरबर्ग, आइफोनका स्टीभ जब्स, कम्प्युटरका पिता चाल्र्स बाबेजलाई नेता मान्नुपर्छ । यी यस्ता आविष्कारक हुन, जसले अमेरिकी राष्ट्रपति र नेपालको एउटा सामान्य नागरिकलाई समान सुविधा दिएका हुन्छन् । आखिर सवैलाई समान आँखाले हेर्नु कम्युनिष्ट समाजवादी हेराइ होइन र ? यदि यसो नभएको भए सवै जनता रोटीको हकदार नभएसम्म केक काटन नपाइने उर्दी लेनिनले किन लगाउँदा हुन ? सबै मजदुरले चिनी हालेको चिया नपाएसम्म आपूm पनि खल्लो चियामा डल्लिने इच्छाशक्ति कहाँबाट पलाउँथ्यो र ? संसार कुन गतिमा अघि बढिरहेको छ ? अबको विकास मोडल कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी, क्षेत्रीय हुँदै विश्व अर्थतन्त्रमा कसरी जोड्न सकिन्छ ? यस्ता खालका चिन्तन राख्ने राजनीतिक प्राणीको संख्या पुरै शून्य छ । देशको कार्यकारी पदमा पुग्नेहरु लंगुरबुर्जा सञ्चालकजस्ता भएका छन् । जसको एउटै ध्याउन्न हुन्छ– दायाँ बायाँ हेर्ने अनि जतिसक्दो सोहोरेर सुईंकुच्चा ठोक्ने । राजनीतिलाई जुवाको खाल ठानेर दाउ लगाउनेहरुको संख्या अहिले विचित्रसंग बढेको छ । समावेशीका नाममा एकाध दर्जन मानिस भएका पार्टीका कमजोर मानिसलाई मन्त्री बनाएर राज्यका निकायलाई होलसेलमै दलालीको अखडा बनाउने सुनियोजित अभ्यास भइरहेको छ । स्वतन्त्र भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु प्राविधिकहरुको भ्रष्ट शैलीबाट यति आजित भएछन् कि ईन्जिनीयरको सम्मेलनमा थोरै मात्र खाइदिनुस् भने क्वाँ क्वाँ रोएका थिए रे !
देश मानिसको जस्तो अनिश्चित आयुमा बाँच्दैन । राज्यले जन्मिएका मात्र होइन, दशकौं पछि जन्मिनेहरुको पनि भविष्य सुरक्षित गरिदिनु पर्छ । धुलिमाटीबाट क, ख सिकेका देखि आईफोन संस्कृतिमा हुर्किएका सम्मले स्वतन्त्रतापूर्वक खेल्न, बढ्न पाउनु पर्छ । निष्ठा र इमान्दारीको राजनीति गर्नेहरु देउता समान हुन्छन् भन्ने नेल्शन मण्डेला र महात्मा गान्धीको इतिहास घोकेकाहरुलाई खोई कुन भामरीले छोपेर हो कुन्नि अक्करको बाटो मात्र रुचाउँछन् । कस्ता कस्ता चक्रवर्ती महाराजले त समयलाई आप्mनो कैदमा लिन सकेनन् भने हाम्रा नेताहरुले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने सोच राख्नु बचपना सिवाय केही होइन ।
मानिस भनेको प्रकृतिको निरन्तरता मात्र हो । सचेत र विवेकी मानिसले केही राम्रो गर्नुपर्छ तर यदि राम्रो गर्न सकिन्न भने भएको विगार्ने अधिकार पनि उसलाई छैन् । यो सत्यलाई राजनीति गर्नेहरुले किलकिलेमा राख्नुपर्छ । पोखरीमा पानी हुन्जेल माछाले कमिला सिध्याउँछ । जब पोखरीको पानी सुक्छ नि, त्यही नपत्याउने कमिलाले माछा सिध्याउँछ । पर्खन सक्नुपर्छ पालो सवैको आउँछ । सत्तालाई पनि शिकारको बिलो ठानियो भने हविगत उही दोहोरिन्छ । पात खाइयो भने त अर्को वर्ष पिपिरा पिपिरी पलाउला तर जरै ढालियो भने त न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी हुन बेर लाग्दैन ।